पक्राउ गरिएपछि यस्तो अवस्थामा छन् गणेश लामा ! प्रहरीले बोक्ने टाइप ५४ हतियार उनीसँग कहाँबाट आयो ?
ARCHIVE, INVESTIGATION » पक्राउ गरिएपछि यस्तो अवस्थामा छन् गणेश लामा ! प्रहरीले बोक्ने टाइप ५४ हतियार उनीसँग कहाँबाट आयो ?
गौशालास्थित होटल पशुपति भिजनमा गोली चलेको छ । घटनास्थलबाट प्रहरी टोलीले गुण्डा नाइके गणेश लामालाई पक्राउ गरी उनीबाट एउटा पेस्तोल र ६ राउण्ड गोली बरामद गरेको छ । लामालाई नियन्त्रणमा लिएर थप अनुसन्धान थालिएको छ । अहिले काठमाडौं प्रहरी प्रमुख एसएसपी विश्वराज पोखरेल घटनास्थल पुगेका छन्।
लामा यसअघि काभ्रेको क्षेत्र नंं १ ‘ख’ बाट प्रदेशसभा सदस्यमा नेपाली कांग्रेसका लागि उम्मेदवार बनका थिए । यद्यपि, उनी नेकपा एमालेका उम्मेदवार चन्द्र लामासँग पराजित भएका थिए । यद्यपी उनी टाप ५४ हतार सहित पक्राउ परेका छन् । यो नेपाल प्रहरीले प्रयोग गर्ने हतियार हो । यसबारेमा समेत अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीको भनाइ छ ।